Eckerd ကောလိပ်ဝင်ပေါက်။ ဓာတ်ပုံ Credit: Allen က Grove
Eckerd ကောလိပ်စိန့်ပီတာစဘတ်, ဖလော်ရီဒါမှာရှိတဲ့ကမ်းနားကျောင်းဝင်းပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးတစ်ဦးရွေးချယ်ပုဂ္ဂလိကလစ်ဘရယ်အနုပညာကောလိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကောလိပ်၏တည်နေရာအဏ္ဏဝါသိပ္ပံနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လေ့လာမှုများအတွက်၎င်း၏ရေပန်းစားအစီအစဉ်များကိုဖြည့်လျက်, လစ်ဘရယ်အနုပညာနှင့်သိပ္ပံများတွင် Eckerd ရဲ့အားသာချက်ကဂုဏ်သတင်းတစ်ခုအခနျးတှငျရရှိခဲ့ ဖိ Beta ကို Kappa ဂုဏ်ပြု Society က။ ကျောင်းလည်း Loren ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရဲ့ featured ခဲ့သည် ပြောင်းလဲခြင်းဘဝအသက်ဒါကကောလိပ်များ ။ ဒါဟာ Eckerd ငါ၏စာရင်းဖွဲ့သောအံ့သြစရာမရှိပါဖြစ်သင့် ထိပ်တန်းဖလော်ရီဒါကောလိပ်များ ။
ကျွန်မ 2010 ခုနှစ်, မေလအတွက်ခရီးစဉ်အတွင်းဒီခရီးစဉ်အတွက် 16 ဓါတ်ပုံပစ်သတ်။
Eckerd များအတွက် GPA, SAT နှင့် ACT ဇယား
အောက်က "Next" button ကို အသုံးပြု. ဓာတ်ပုံခရီးစဉ် Continue ။
Eckerd ကောလိပ်မှာ Franklin Templeton အဆောက်အအုံ
Eckerd ကောလိပ်မှာ Franklin Templeton အဆောက်အအုံ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Allen က Grove
အားလုံး Eckerd ကျောင်းသားများကိုလျင်မြန်စွာကျောင်းဝင်းတံခါးဝအနီးကဒီကြီးမားပြီးဆွဲဆောင်မှုအဆောက်အဦးနှင့်အတူအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လာ။ အဆိုပါ Franklin Templeton အဆောက်အအုံတက္ကသိုလ်နယ်မြေ၏အဓိကအုပ်ချုပ်ရေးအဆောက်အဦတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်ဘဏ္ဍာရေးအကူအညီရုံးမှနေအိမ်, စီးပွားရေးရုံးနှင့်, အလားအလာကျောင်းသားများအတွက်အထူးစိတျဝငျစားသည်ဝင်ခွင့်များရုံးဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယထပ်ပြည်နယ်-Of-The-Art Rahall ဆက်သွယ်ရေး Lab ကမှမူလနေရာဖြစ်သည်။
သငျသညျ Eckerd ရဲ့ကျောင်းဝင်းရှာဖွေစူးစမ်းနေတယ်ဆိုရင်, ဒုတိယပုံပြင်လသာဆောင်မှလှေကားတက်ဦးမှသေချာပါစေ။ သငျသညျကျောင်းဝင်းမြက်ခင်းပြင်များနှင့်အဆောက်အဦးများ၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အမြင်များနှင့်အတူဆုခခြဲ့ပါလိမ့်မယ်။
Eckerd ကောလိပ်မှာ Seibert Humanities အဆောက်အအုံ
Eckerd ကောလိပ်မှာ Seibert Humanities အဆောက်အအုံ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Allen က Grove
အဆိုပါ Seibert Humanities အဆောက်အအုံ, ၎င်း၏အမည်ကိုအကြံပြုအဖြစ်, Eckerd ကောလိပ်မှာလူမှုရေးအစီအစဉ်များမှမူလနေရာဖြစ်သည်။ သငျသညျအမေရိကန်လေ့လာရေး, မနုဿဗေဒ, တရုတ်, Classical Humanities, နှိုင်းယှဉ်စာပေ, အရှေ့အာရှလေ့လာရေးလေ့လာဖို့စီစဉ်မယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်သမိုင်း, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေး, စာပေ, ဒဿနိကဗေဒ, ဒါမှမဟုတ်ဘာသာရေးလေ့လာရေး, သင်လျင်မြန်စွာဒီအဆောက်အဦးနှင့်အတူအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါအဆောက်အဦကိုလည်းကောလိပ်ရဲ့စာပေပြုစုရေးရေးစင်တာနှင့်နိုင်ငံတကာပညာရေးနှင့်ပိတ်ကျောင်းပရဝုဏ် Programs ကို၏ရုံးမူလနေရာဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကောလိပ်များကိုသာသေးငယ်တဲ့လက်တဆုပ်စာ Eckerd ထက်ပြည်ပမှာလေ့လာမှုပါဝင်မှုများတဲ့အဆင့်မြင့်ရှိသည်။
Eckerd ကောလိပ်မှာ Armacost စာကြည့်တိုက်
Eckerd ကောလိပ်မှာ Armacost စာကြည့်တိုက်။ ဓာတ်ပုံ Credit: Allen က Grove
အဆိုပါ Armacost စာကြည့်တိုက်၏တည်နေရာဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ခဲ့သည် - ကကျောင်းဝင်း၏ပညာရေးနှင့်လူနေအိမ်နှစ်ဖက်ရဲ့လမ်းဆုံမှာသေးငယ်တဲ့ရေကန်အားဖြင့်ထိုင်တော်မူ၏။ ကျောင်းသားများသူတို့စာသင်ခန်းသို့မဟုတ်အိပ်ဆောင်ခန်းထဲကနေလာမယ့်နေကြသည်ရှိမရှိလွယ်ကူသောစာကြည့်တိုက်ရဲ့ 170,000 ပုံနှိပ်ခေါင်းစဉ်မှဝင်ရောက်ခွင့်, 15000 စာနယ်ဇင်းနှင့်မြောက်မြားစွာလေ့လာမှုခန်းရှိသည်။
ပညာရေးဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်စင်တာသင်တန်းနှင့်စာသင်ခန်းအသုံးပြုမှုအတွက်မာလ်တီမီဒီယာပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူစမ်းသပ်များအတွက်အာကာသထောက်ပံ့ပေးသောဖြစ်ပါသည်အဖြစ်, သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာန်ဆောင်မှုများ, စ, စာကြည့်တိုက်၌ကျိန်းဝပ်ဖြစ်ပါတယ်။
Eckerd ကောလိပ်မှာ Visual Arts Center က
Eckerd ကောလိပ်မှာ Visual Arts Center က။ ဓာတ်ပုံ Credit: Allen က Grove
Eckerd မှာရွေးနုတ်ဖိုး Visual Arts Center ကကောလိပ်ရဲ့အမြင်အာရုံအနုပညာဒြေနှင့်ဗိုလ်ကြီးထောက်ခံပါတယ်။ Eckerd မှာကျောင်းသားများထိုကဲ့သို့သောပန်းချီ, ဓာတ်ပုံနဲ့, ကြွေထည်, ပုံနှိပ်အနုပညာ, ပုံဆွဲ, ဗွီဒီယိုနှင့်ဒီဂျစ်တယ်အနုပညာအဖြစ်မီဒီယာများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Eckerd က၎င်း၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံနှင့်အဏ္ဏဝါသိပ္ပံအစီအစဉ်များအတွက်အကောင်းဆုံးလူသိများဖြစ်နိုင်ပေမဲ့, အနုပညာမဆိုပေးထားအချိန်တွင်ကောလိပ်တက်ရောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. 50 ဗိုလ်ကြီးတို့နှင့်လည်းလူကြိုက်များကြသည်။
အဆိုပါပညာသင်နှစ်၏အဆုံး Eckerd ရဲ့အနုပညာကြောငျးသားမြား၏အခွက်တဆယ်ကိုမြင်ရဖို့အကြီးအအချိန်ဖြစ်ပါသည် - အားလုံးကျကွီးရှယျအိုမြားအဆိုပါ Elliott သည်ပြခန်းတွင်အလုပ်၏ခန္ဓာကိုယ်တင်ဆက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Eckerd ကောလိပ်မှာ Galbraith အဏ္ဏဝါသိပ္ပံဓာတ်ခွဲခန်း
Eckerd ကောလိပ်မှာအဏ္ဏဝါသိပ္ပံဓာတ်ခွဲခန်း။ ဓာတ်ပုံ Credit: Allen က Grove
အဏ္ဏဝါသိပ္ပံနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံ Eckerd ကောလိပ်မှာလူကြိုက်အများဆုံးဗိုလ်ကြီးနှစ်ခုဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထို Galbraith အဏ္ဏဝါသိပ္ပံဓာတ်ခွဲခန်းအဆိုပါနယ်ပယ်များတွင်သုတေသနထောက်ပံ့သည့်အဆောက်အဦတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါအဆောက်အဦကျောင်းဝင်း၏တောင်ဘက်အဆုံးအပေါ်ကမ်းနားပေါ်မှာထိုင်လျက်, Tampa ဂလားပင်လယ်အော်ကနေရေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်အမျိုးမျိုးသောဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်ငါးမွေးကန်အဆောက်အဦအတွက်သမုဒ္ဒရာရဲ့အပင်နှင့်တိရိစ္ဆာန်ဘဝလေ့လာနေအတွက်အသုံးပြုမှုအတွက်အဆောက်အဦးမှတဆင့် pumped ဖြစ်ပါတယ်။
အဏ္ဏဝါဇီဝဗေဒလေ့လာနေစိတ်ဝင်စားကျောင်းသားများကိုလယ်များအတွက်ဒါကောင်းစွာသင့်လျော်မယ့်တည်နေရာနှင့်တစ်ခုလုံးဝဘွဲ့ကြိုအာရုံနှင့်အတူအနည်းငယ်ကောလိပ်များကိုရှာဖွေမည်, Eckerd လက်ပေါ်သုတေသနနှင့်လယ်ပြင်အလုပ်အတွက်အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးနှင့်အတူကျောင်းသားများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးသည်။
Eckerd ကောလိပ်မှာတောင်ပိုင်းသဲသောင်ပြင်။ ဓာတ်ပုံ Credit: Allen က Grove
Eckerd ရဲ့ကမ်းနားအိမ်ခြံမြေကောင်းစွာစာသင်ခန်းထက်ကျော်လွန်သွားအားသာချက်ရှိပါတယ်။ ညာဘက်ဘေးနားရှိအဏ္ဏဝါသိပ္ပံဓာတ်ခွဲခန်းမှတောင်ပိုင်းသဲသောင်ပြင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းဝင်း၏ဤဧရိယာသဲဘော်လီဘောတရားရုံးတစ်တဲ, တစ်ဦးဘောလုံးလယ်ကွင်းများနှင့်, သင်တန်း, သငျသညျအထကျပါဓာတ်ပုံများတွင်တွေ့မြင်အဖြူရောင်သဲကမ်းခြေပေးထားပါတယ်။ မေလထဲမှာ, ဘောလုံးလယ်ကွင်းကျောင်းဆင်းပွဲများအတွက်ကြီးမားသောတဲကိုတို့ကလွှဲပြောင်းယူနေပါတယ်။
တစ်ဦးကစုံတွဲဒီရေတောကျွန်းများကမ်းခြေကနေမြင်စေနိုင်ပြီး, ကျောင်းသားများကိုမကြာခဏယပ်လှေအားဖြင့် Pinellas အမျိုးသားတောရိုင်းခိုလှုံရာနှင့် Bird ကိုသန့်ရှင်းရာဌာနကိုစူးစမ်း။
Eckerd ကောလိပ်မှာတောရိုင်း။ ဓာတ်ပုံ Credit: Allen က Grove
Eckerd ဖလော်ရီဒါတစ်အကြီးအကျယ်ဖွံ့ဖြိုးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတည်ရှိသောစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်စိန့်ပီတာစဘတ်ကျွန်းဆွယ်၏အစွန်အဖျားပေါ်တွင်ကမ်းနားတည်နေရာကိုသင်မန်များနှင့်သစ်ပင်ပန်းမန်များအဘယ်သူမျှမပြတ်လပ်မှုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုသည်။ ခရုစုတ်, လင်း parakeets, spoonbills, တောငန်းများနှင့် parakeets တက္ကသိုလ်နယ်မြေမကြာခဏ။ ကြှနျတေျာ့ခရီးစဉ်အတွင်း, ဒီအညိုရောင်ဝံပိုငှက်ဟာ boathouse အားဖြင့်အထိုင်ပေါ်ကထွက်ဆွဲထားခဲ့သည်။
Eckerd ကောလိပ်မှာအစိမ်းရောင် Space ကို
Eckerd ကောလိပ်မှာအစိမ်းရောင် Space ကို။ ဓာတ်ပုံ Credit: Allen က Grove
ငါဖလော်ရီဒါကောလိပ်များငါ၏ခရီးစဉ်အတွင်း 15 ကျောင်းခွဲများသွားရောက်ခဲ့ပြီးနှင့် Eckerd ရဲ့သံသယမရှိကျွန်မအကြိုက်ဆုံးတွေထဲကဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာသူ့ရဲ့ကမ်းနားတည်နေရာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အသုံးပြုတဲ့ဆွဲဆောင်မှုကျောင်းဝင်းပါပဲ။ သစ်ပင်, မြက်ခင်းပြင်, ရေကန်များ, coves နှင့်ကမ်းခြေ - အဲဒီကျောင်းရဲ့ 188 ဧကအစိမ်းရောင်အာကာသစာရေးနှင့်အတူကောင်းစွာရှုခင်းဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာကောလိပ်သင့်ရဲ့အနာဂတျမှာမဟုတျပါဘူးလျှင်ပင်ရှာဖွေစူးစမ်းတန်ဖိုးရှိကျောင်းဝင်းပါပဲ။
Eckerd ကောလိပ်မှာ Wireman Chapel
Eckerd ကောလိပ်မှာ Wireman Chapel ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Allen က Grove
Eckerd ကောလိပ်အဆိုပါ Presbyterian ဘုရားကျောင်း (USA) နှင့်အတူဆက်နွယ်ပေမယ့်ကျောင်းသားများကိုကွဲပြားခြားနားယုံကြည်ချက်များဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Wireman Chapel တက္ကသိုလ်နယ်မြေပေါ်တွင်ဝိညာဉ်ရေးရာအသက်တာ၏နှလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကက်သလစ်ကျောင်းသားများကို Mass နှင့်ဝန်ခံတက်ရောက်ရန်နိုင်ပြီး, ကောလိပ်လည်းမဟုတ်တဲ့ဂိုဏ်းခရစ်ယာန်န်ဆောင်မှုပေးထားပါတယ်။ ကျောင်းသားအုပ်စုများ Hillel နှင့်သြသဒေါက်ခရစ်ယာန် Fellowship တို့ပါဝင်သည်။ ထို့အပြင်ကောလိပ်၏တည်နေရာကျောင်းသားများကိုဟိန္ဒူ, ဗုဒ္ဓဘာသာ, အစ္စလာမ့်နှင့် Tampa နှင့် St. ပီတာစဘတ်ဧရိယာမှာရှိတဲ့တခြားဘာသာရေးအသိုင်းအဝိုင်း access ကိုပေးသည်။
Eckerd ကောလိပ်မှာ Wallace Boathouse
Eckerd ကောလိပ်မှာ Wallace Boathouse ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Allen က Grove
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အနည်းငယ်ကောလိပ်များကျောင်းသားများရေတို့အားဤသို့သောအဆင်သင့်သုံးစွဲနိုင်သည်။ အားလုံးကျောင်းသားများအလှေစီးနေသည်, ကနူး, ရှကျလှေ, ရွက်ပျဉ်ပြားများနှင့်ငါးဖမ်းကိရိယာများကိုထုတ်စစ်ဆေးနိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းများရှိသည်။ လေးနက်သောကျောင်းသားများကို EC-SAR, Eckerd ရဲ့အဏ္ဏဝါကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်ရနိုင်။ Eckerd ရဲ့ရေတပ်အတွက်တချို့ကလှေအဏ္ဏဝါသိပ္ပံသုတေသနနှင့်လူတန်းစားလယ်ကိုအလုပျအတှကျအသုံးပြုကြသည်။ ကျောင်းသားများကိုလည်းယပ်လှေအားဖြင့်အနီးအနားရှိဒီရေတောကျွန်းများစူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Eckerd ကောလိပ်မှာဘရောင်းခန်းမ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Allen က Grove
ဤနေရာတွင်ပုံဘရောင်းခန်းမထဲမှာ 24 နာရီကော်ဖီအိမ်၏အပြင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဘရောင်းခန်းမ Eckerd ကောလိပ်မှာကျောင်းသားဘဝ၏စိတ်နှလုံးမှာရပ်။ ကော်ဖီအိမ်သူအိမ်သားတို့နှင့်အတူ, အဆောက်အအုံအဆိုပါထရီ (Eckerd ရဲ့ကျောင်းဝင်းသတင်းစာ) ကိုအိမ်, ကျောင်းရေဒီယိုဘူတာရုံများနှင့်အိုးအိမ်များနှင့်နေအိမ်သို့ဘဝ, ဝန်ဆောင်မှုသင်ယူမှုနှင့်ကျောင်းသားရေးရာရုံးဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းဝင်းလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ၏ကြီးမြတ်အများစုဘရောင်းခန်းမအတွင်းကျောက်ချရပ်နားနေကြသည်။
Eckerd ကောလိပ်မှာ Iota Complex
Eckerd ကောလိပ်မှာ Iota Complex ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Allen က Grove
2007 ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်ခြင်း, Iota Complex Eckerd ကောလိပ်ရဲ့လူနေအိမ်ရှုပ်ထွေးသော၏နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအဆောက်အဦးစိတ်တွင်ရေရှည်တည်တံ့လျက်, Landscaping ပျေါလှငျဇာတိအပင်နှင့်အတူဆောက်လုပ်ထားနှင့်ဆည်မြောင်းများအတွက်ပြန်ဖြစ်ရေကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
Eckerd ရဲ့အိုးအိမ်ရှုပ်ထွေးသောအများအပြားကဲ့သို့ပင် Iota (Byars အိမ်တော်အထက်ဓာတ်ပုံများတွင် featured သည်) လေး "အိမ်များ" ၏ဖွင့်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ Iota Complex 52 နှစ်ဆထေိုခန်းနှင့် 41 ဆိုရင် single ရှိပါတယ်။ အဆိုပါရှုပ်ထွေးနှစ်ခုမီးဖိုချောင်နှစ်ယောက်ရေချိုးခန်းခန်းရှိပါတယ်, နှင့်လေးအိမ်၏အသီးအသီးစုံတွဲတစ်တွဲ Lounge ဒေသများရှိပါတယ်။
Eckerd ကောလိပ်မှာအိုမီဂါ Complex
Eckerd ကောလိပ်မှာအိုမီဂါ Complex ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Allen က Grove
Eckerd ကောလိပ်မှာသုံးထပ်ရှိတဲ့အိုမီဂါ Complex အိမ်များ Junior နှင့်ကျကွီးရှယျအိုမြား, 1999 ခုနှစ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအဆောက်အဦ Single-ထေိုနှင့်ကို double-ထေိုခန်းအမျိုးမျိုးအတွက် configured 33 four- သို့မဟုတ်ငါးလူတစ်ဦးအစုံရှိပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကို suite ကိုနှစ်ခုရေချိုးခန်းနှင့်အပြည့်အဝတပ်ဆင်ထားမီးဖိုချောင်ရှိတယ်။ အိုမီဂါ Complex ၏လသာဆောင်ကနေကျောင်းသားများကျောင်းဝင်းနှင့်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်၏ကြီးမြတ်အမြင်များရှိသည်။
Eckerd ကောလိပ်မှာ Gamma Complex
Eckerd ကောလိပ်မှာ Gamma Complex ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Allen က Grove
Gamma Complex Eckerd ကောလိပ်မှာအစဉ်အလာအိမ်ရာရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Alpha, Beta ကို, မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ, Epsilon, Gamma, Iota, Kappa သို့မဟုတ် Zetas - Eckerd မှာအားလုံးပထမဦးဆုံးနှစ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအစဉ်အလာအိမ်ရာရှုပ်ထွေးသော၏တဦးတည်းနေထိုင်ကြသည်။ အဆိုပါရှုပ်ထွေးသောတစ်ခုချင်းစီ "အိမ်များ" လေးယောက်ထ လုပ်. အိမ်များအများအပြား themes များရှိနေသည်။ ကျောင်းသားများထိုကဲ့သို့သောအသိုင်းအဝိုင်းဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်ပတ်ဝန်းကျင်အဖြစ်အလားတူအကျိုးစီးပွားဝေမျှသူကျောင်းသားများနှင့်အတူအိမျတျော၌နထေိုငျနိုငျသညျ, သို့မဟုတျသူတို့တစ်တွေ "အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အိမ်တော်" ကိုရွေးချယ်ပါသူတို့နှင့်အတူကောလိပ်ကျောင်းမှ fluffy ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သည်။ Eckerd လည်းအများအပြား All-အမျိုးသမီးအိမ်များပေးထားပါတယ်။
တစ်ခုချင်းစီကိုအိမ်သူအိမ်သား 34 36 ကျောင်းသားများကိုရှိပါတယ်, ဆုံးနဲ့ကြမ်းပြင်များကပူးတွဲ-Ed နေကြသည်။ သင်ပိုမိုဓာတ်ပုံများ (Flickr ကို) ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Eckerd ကောလိပ်ကျောင်းဆင်းပွဲတဲ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Allen က Grove
ငါမေလတွင် Eckerd ကောလိပ်မှာရောက်တုန်း, ကျောင်းသားများနွေရာသီတက်သည်ထုပ်ပိုးနှင့်ကျောင်းဆင်းပွဲမှာတဲတောင်ပိုင်းကမ်းခြေအားဖြင့်ဘောလုံးလယ်ကိုအပေါ်ကို set up ခဲ့သည်အလုပ်များဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာကောလိပ်သင့်ရဲ့လေးနှစ်နိဂုံးချုပ်များအတွက်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်တည်နေရာပါပဲ။
ပညာရေးဆိုင်ရာစာရင်းအင်းများအတွက်အမျိုးသားရေးစင်တာရဲ့အဆိုအရ 2004 ခုနှစ်တွင်၎င်းတို့၏လေ့လာမှုများစတင်ခဲ့သူကိုကြောငျးသားမြားအတှကျ 63% လေးနှစ်အတွက်ဘွဲ့ရများနှင့် 66% ကိုခြောက်နှစ်အတွင်းဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါတရားဝင် Eckerd ဝက်ဘ်ဆိုက်
GPA, Eckerd များအတွက် SAT ရမှတ်များနှင့် ACT ဇယား
Olam Ha ဘဆိုတာဘာလဲ
နပိုလီယံနှင့် 1796-7 ၏အီတလီကင်ပိန်း
အဆိုပါအိုလံပစ်ဘုရားသခင်အကြောင်းဖြစ်ရပ်မှန်များ - Hermes
အဘယ်မှာရှိ Distemper Paint မှစ. လာကြသလား
ငရုတ်ကောင်းနှင့်ရေသိပ္ပံကို Magic Tricks
အဆိုပါလီယိုဆယ်ကျော်သက် - ရာသီခွင်အရိပ်လက္ခဏာများ
ကျွမ်းဘား Dominique Dawes အကြောင်းသိထားမှ 8 အရာ
အရူး Rick Santorum Quotes
Long-အဝေးသင် Surf Techniques Casting
ထိပ်တန်း 10 ရော့ခ်မင်္ဂလာဆောင်ပထမဦးစွာအကသီချင်းများ
စပိန်၏ Isabella II ကို: အငြင်းပွားဖွယ်ရာအနန္တတန်ခိုးရှင်
မအောင်မြင်သော Debate နှစ်ဖက်စလုံးကနေ 20 Key ကို Arguments